Kushamiswa Kwokuwana Vechidiki IITians ZVIRI NDI MUMWE MUMAGWARO: Sundar Photosi - ITS
Kushamiswa Kwokuwana Vechidiki IITians NDIRI NDI MUMWE MUMWE MUMWE: Sundar Photosi
Kharagpur: Achibvuma kuti aiwanzoshandisa mabhasi emisidhari mukati mezuva rake rekuvaka paIIT Kharagpur, Google CEO Sundar Photosi musi weChina wakataura zvisingashamisi kuti awane vechidiki IITians zvinoreva kupinda maIIM kunyange zvainetseka pamusoro pekukosha kwekuwana ruzivo rwechokwadi.
"Kune huwandu hunorema hunotora mushure mekugadzirisa kwemitemo yese kuburikidza nebasa rako (muIndia). Paunenge uri kuchikoro chesekondari unoona chikoro. Ndinoshamiswa zvikuru kuti vanhu vanopinda maIIT uye nokukurumidza vari kufungidzira IIM nezvimwewo. Zvinotonyanya kukosha kuwana ruzivo rwechokwadi, "Photoi akataura panguva inofadza neIITians pano nhasi.
Kudzokera kune zvikonzero 23 makore achangopedzisa B.Tech muna 1993, akati pasi pekutsvaga mari inowedzera simba mumabhuku uye kuchinja chikoro.
Pamusana wekubuda kwechirwere kuti ayeuke nzvimbo dzake mazuva, akaenda kuimba yake yeimba yevasungwa, akasangana nevadzidzisi uye akabatana nehupenyu.
"Zviri pachena," ndiyo yaiva mhinduro yake paakabvunzwa kana akadzidzira mabirasi.
"Taimbogara takasviba manheru manheru uye mumakira masikati akashaya," akaongorora.
Photoi akati anowana kushamiswa pakuteerera kuti rimwe remakore rechisere rakaderera rakatanga kugadzirira IITs.
"Pakati penguva yangu, chikamu chevanhu vakati munhu uyu haana kupinda muchikoro ichi uye ndiwo mugumo wemugwagwa kwaari," akadzokorora.
Akadzidzisa maitiro pamusoro pezvimbo yake yekupedza kudzidza kuedza nezvinhu zvakasiyana-siyana, kubuda pane imwe nhengo, kuva nemaonero akanaka uye kutora mushure mekushingaira kwavo.
India, ivai sezvazvingaita, akati, ane chivimbo chakasimba mumurairo sevadziviriri vachikurukurirana nguva dzose.
MuAmerica, Filei akati, kuStanford somuenzaniso, zvinotora matanho makuru apo pavari mugore ravo rapera.
Pakupera kwekunyora B.Tech yake mune zvinyorwa zvemasallurgical uye zvigadzirwa kubva kuIIT, Filei akaita MS yake muUnjiniya neZvivako Science kubva kuStanford University uye MBA kubva kuWharton School ndokubatana neGoogle mu2004.
Zvakanga zviri pakati penguva ino mune zvikonzero zvekuti akave asina tariro neaanodzidza naye Anjali uye akaroorana naye gare gare.
Akarondedzera kuti aiwanzoenda sei kumajaya madzimai eimba kuzosangana naye uye akanyadziswa apo mumwe munhu aizodanidzira nenzwi guru, achiti "Anjali Sundar ari kukudana".
Pashure pokutsvaira mumakore mana anoshamisa munzvimbo, akati, akanzwa kusuruvara apo nguva yaida kutsvaga.
"Hazvishamisi kudzoka 23 makore mushure mezvo chokwadi," anonyanya kufadza Photoi akati.